Us About - Airpull (Shanghai) Sifeey Co., Ltd
Bilaabo 1996, Airpull (Shanghai) Filter ayaa tan iyo qaan galay saaraha ah kama dambaysta ah ee filtarrada kombaresarada hawada. Sida a shirkad Chinese hi-tech xilligii casri ah, Shirkadda ayaa soo bandhigay qalabaysan xirfadeed for design, wax soo saarka, iyo qaybinta. Waxaan bixinaa kala duwan ee qaybo ka bedelka kombaresarada hawada oo ay ku jiraan qaybaha fasalka sare sida shaandhada hawada, filtarrada saliid, iyo separators saliid hawada. Waxyaabahani waxaa si gaar ah loogu talagalay in la jaan wata magac fiican u yaqaan sida Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Compair, Sullair iyo Fusheng. Waxa intaa dheer in filtarrada kombaresarada hawada, waxa kale oo aanu soo saari kartaa filtarrada saliid Haydarooliga iyo filtarrada gaari loogu talagalay macaamiisha our.
Our filaayo in madal hawlgalka ganacsiga waxaa ka mid ah nidaam istiraatiiji ah maamulka in ahmiyad gaar hal-abuurnimo, Caalamiyeynta, iyo daryeelka macaamiisha. model Shirkada saabsan maamulka khayraadka aadanaha waxaa loogu talagalay inay kobciso koritaanka tayo shakhsi. Waxaan ku dhiirigelinaynaa waxbarashada joogtada ah la casharo joogto ah loo qorsheeyay iyo siminaaro. shaqaalaha Our u yaqaana ayaa si fiican u bartay in nidaamka hubinta tayada.
Sida doode ilaalinta deegaanka iyo ka loo qoondeeyey "Green Enterprise", waxaan ku soo bandhigay Airpull (Shanghai) initiative Filter for bey'ada saaxiibtinimo iyo tamarta waxyaabaha ku ool ah. All qalabka filter ka kooban yihiin HV premium warqad galaas-fiber filter, ka Maraykanka iyo Jarmalka laga keeno. substrate The American iyo Jarmal qabano oolnimada shaandhaynta si loo yareeyo kharashka hawlgalka iyadoo nolosha adeeg iman kara komberesarrada hawada. qalabka wax soo saarka Advanced iyo farsamooyinka wax soo saarka la safeeyey ayaa inoo ogolaatay si ay u gaaraan awood-soo-saarka sanadle ah oo 600 oo kun oo unugyo. ISO9001 The: Nidaamka Maareynta Tayada 2008 waa in saameyn.
Iyada oo Shanghai sida saldhig-of-hawlaha, waxaan adduunka dhoofin in gobollada ay ka mid yihiin Europe, South America, Koonfur-Bari Asia, Bariga Dhexe, iwm Waxaan leenahay qaybiyaha loo qoondeeyey in Thailand iyo wakiilada hoose ee dalalka sida Iiraan iyo Pakistan. Gudaha, network adeegeena bixisaa caymis buuxa wadanka oo dhan.
In 1996, waxaan bilaabay saarta gulufyadii filter, waayo, saddex filtarrada baabuurta ka sugayeen.
In 2002, baaxadda of takhasuska our ballaadhiyey oo ka mid ah filtarrada komberesarrada hawada fur.
Sannadkii 2008, warshad cusub oo la dhisay. Shirkadda Our noqday diiwaan hoos Airpull Filter magaca (Shanghai) ah.
Sannadkii 2010, waxaan xafiisyo meelaha muhiimka ah sida Chengdu, XI'an, iyo Baotou aasaasay.
In 2012, nidaamka maamulka waxqabadka BSc la fuliyo. qabsashada Tani wax ku ool ah saamaynasa technology cusub oo laga helay ilo gudaha iyo dibadda labadooduba our waajihid.
Laga soo bilaabo 2012 ilaa 2014, suuqa our caalamka ayaa koraya si degdeg ah, oo aan si guul leh ka qaybgalay Messe Hannover ee Germany iyo PCVExpo ee Russia.